Wararka Maanta: Sabti, Apr 7 , 2012-Afhayeenka Baarlamaanka Somalia iyo wafdi uu hoggaaminay oo u kicitimay Degmada Xudur ee Gobolka Bakool
Afhayeenka Baarlamaanka Somalia iyo wafdi uu hoggaaminay oo u kicitimay Degmada Xudur ee Gobolka Bakool Sabti, Abriil 07, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha baarlamaanka KMG ah ee Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo baqonimadii maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo kusii jeeda magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo ay todobaad ka hor la wareegeen ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya oo iskaashanaya.
Wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa: taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, Shariif Sheekunaa Maye, saraakiil AMISOM ka tirsan, qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda, xildhibaanno iyo mas'uuliyiin kale.
Booqashada wafdigan oo aan la sheegin inta maalmood ee ay qaadanayso ayaa waxaa lagu wadaa inay mas'uuliyiintu ugu kuurgalaan xaaladda degmada Xudur. Iyadoo guddoomiyaha wafdiga uga haray degmada Baydhabo, waxaase wafdiga Baydhabo kasii raacay xubno ay ka mid yihiin: guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Cali (Tall) iyo guddoomiyaha degmada maamulka degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed.
Wafdigan ayaa waxaa degmada Xudur kusoo dhaweeyay xidlhibaanno horay ugu sugnaa, qaar ka mid ah maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Itoobiya.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, Shariif Sheekhunaa ayaa la sheegay in sababta uu u tagay Xudur ay tahay sidii ciidammo booliis ah loo geyn lahaa Xudur, sidoo kalena uu ugu kuurgeli lahaa xaaladda ammaan ee degmadaas.
Degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxay ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa Itoobiya kula wareegeen dagaal la'aan hal todobaad ka hor, iyadoo socdaalka uu Shariif Xasan ku tagay uu noqonayo kii labaad oo uu ku tago gobollada Bay iyo Bakool.
Sabti, April 07, 2012(HOL): 12 sano guuradii ciyaaraha Waqooyiga America ee sanadkiiba mar la qabto ayaa maanta ka billowday magaalada Columbus ee Gobolka Ohio. Ciyaaraha sanadkan ayaa koobka loo dhigay waxaa loogu magic-daray halyeeyadii u soo halgamay Isboortiga Soomaaliyeed... Ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Turkiga oo sameysay Urur iyo tahriibayaal ay Soomaali ku jirto oo lagu qabtay Turkiga 4/7/2012 9:45 AM EST